အကျပ်အတည်းဆုံးနှစ်ကို ကြုံတွေ့ရမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ မှ ထုတ်ပြန်…. – Alanzayar
အကျပ်အတည်းဆုံးနှစ်ကို ကြုံတွေ့ရမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ မှ ထုတ်ပြန်….
အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်များ နှင့် မိသားစုဝင်များ အတွက် အနေအစား တစက်ကလေးမျှ ထိခိုက်စရာ မရှိသော်လည်း ၂၀၂၂ အတွက် မြန်မာ တို့ အဖို့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှု စီးပွားရေး၊ စားဝတ်နေရေး အတွက် လိုအပ်မှု များစွာ နှင့် နေထိုင်သွားရလိမ့်မည် ဖြစ်သည် ဟု ကု လ မှ ယခုလို ကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်သည်။
၂၀၁၅ မှ စ၍ ရရှိခံစားခဲ့ရသော အကျိုးရလဒ်များသည် နိုင်ငံအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာ‌သော ကသောင်းကနင်း ဖြစ်ရပ်များကြောင့် လူဦးရေ တဝက် နီးပါးသည် ဆင်းရဲ ပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန် အသက်မွေး ကြရတော့မည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတွင်းရှိ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၁၄ ခု အနက် ၁၃ ခုသည် အစာအဟာရ ချို့တဲ့လာသည့် ဒဏ် နှင့် ကြုံတွေ့လာရဖွယ် ရှိနေသည်။ ထို့အတွက် ၁၄.၄ သန်း ခန့် ရှိ ပြည်သူများ သည် အကူအညီများ တခုမဟုတ် တခု လိုအပ်လာဖွယ် ရှိနေသည်။
ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာနေခြင်း၊ ကိုဗစ်ကြောင့် သွားလာမှု ကန့်သတ်ခံရခြင်း၊ ဆက်လက်ပြီး ကျီးလန့်စားစား နေထိုင်သွားကြရမည့် အကြောင်းများ ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ အန္တရာယ် များ ၏ ရိုက်ခတ်မှု အများဆုံး ခံစားရဖွယ် ရှိနေသည့် လူတန်းစား များ အဖို့ စားသောက်ကုန် နှင့် အခြား အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ ဝယ်ယူထားရန် အရေးတကြီး ပြင်ဆင်ထားရဖို့ ဖြစ်လာနေသည်။
လယ်သမားများအဖို့ သီးနှံဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလာခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ စရိတ်စက ကြီးမြင့်လာခြင်း နှင့် ချေးငွေများ လုံလောက်စွာ မရရှိမှု များ နှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ထို့အတွက် အခြေခံ စားကုန် ဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာတော့မည် ဖြစ်သည်။
လူဦးရေ တဝက် နီးပါးသည် ဆင်းရဲ ပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန် အသက်မွေး ကြရတော့မည်ဇူလိုင် နှင့် ဩဂုတ် လများ အတွင်း ရေကြီး ရေလျံမှုများ ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် လူပေါင်း ၁၂၀,၀၀၀ ခန့် ထိခိုက် သွားခဲ့ရပြီး သီးနှံများ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြန်သည်။
နိုင်ငံရေး နှင့် လုံခြုံရေး အခြေအနေများသည် ဆက်လက်ပြီး တည်ငြိမ်မှု ရှိမည် မဟုတ်သည့်အပြင် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု နှုန်း သည် သိသိသာသာ လျော့နည်းနေမှု နှင့် အသစ် ထွက်ပေါ်လာသော မျိုးကွဲ ဗိုင်းရပ် အန္တရာယ် များ ကြောင့် စတုတ္ထလှိုင်း ဒဏ် နှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိနေသည်။
လယ်ယာထွက်ကုန် ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်ကျဆင်းနေဖွယ် ရှိ၍ စားကုန် ဈေးနှုန်း များ အနည်းငယ် ကျဆင်းလာဖွယ် ရှိသော်လည်း တဖက်တွင် ဝင်ငွေ လျော့နည်းလာမှု နှင့် အတူ လူသုံးကုန် ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းများ ထပ်မံ မြင့်တက်လာဖွယ် ရှိနေသည်။
ကလေးများ နှင့် လူငယ်များ၏ ခန္တာကိုယ် ပိုင်း နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ထိခိုက်မှု ရှိလာနေမည့် အရေးကြောင့် လူမှု အသိုက်အဝန်း အတွင်း ကြီးစွာသော ဝန်ထုတ် ဝန်ပိုးများ နှင့် ကြုံလာရဖွယ် ရှိနေသည်။
လူကုန်ကူးခံရမှု ဖြစ်ပွားနှုန်းသည် ဆက်လက် မြင့်တက်လာဖွယ် ရှိနေသည်။ အထူးသဖြင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားနေသော ဒေသများတွင် ကလေးသူငယ်များ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်ခံရမှု နှင့် အများဆုံး ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိနေသည်။
ကလေး သူငယ် ၁၂ သန်း ခန့်သည် ပညာရေး တပိုင်းတစ အခြေအနေနှင့် ကြုံလာရဖွယ် ရှိနေပြီး ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်ခဲ့သည့်တိုင် စာသင်ခန်းများသို့ လူစုံတက်စုံ ပြန်လာနိုင်မည့် အခွင့် အရေးသည် လွန်စွာ နည်းပါးလျက် ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူ အညီ ပေးရေး အဖွဲ့ OCHA မှ မြန်မာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခုလို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အခြေအနေများ ရင်ဆိုင်ရတော့မည်ကို တကမ္ဘာလုံး က ရိပ်စားမိနေ‌သော်လည်း အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်ကမူ ထိုအရေးသည် ၎င်းနှင့် လားလားမျှ မဆိုင်သည့်အလား တရုတ်၏ ရေငုပ်သ‌င်္ဘော တပတ် နွမ်း ရေချပွဲသို့ တက်ရောက်ကာ ၎င်း၏ အောင်မြင်မှူ တခု အဖြစ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားလျက် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော် ၎င်းအား နိုင်ငံတကာ တရားရုံးများမှ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် အဖြစ် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ကာ ခုံရုံးတင် စစ်ဆေးခံရမည့် အရေးကိုတော့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်လာနေသည် လက္ခဏာ တရပ် အဖြစ်အာဂျင်တီးနား တရားရုံး နှင့် အိုင်စီစီ တို့မှ ပေးပို့လာသည့် စာများကို လက်ခံခြင်း မပြုရန် တရားသူကြီးများအား ညွန်ကြားထားသည့် စာ ပေါက်ကြားလာမှုက သက်သေခံလျက် ရှိနေသည်။
ထိုသို့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် လာနေမှုများ နှင့် အတူ ၎င်းရာထူးမှ မပြုတ်ကျရေး အတွက် မည်မျှပင် သတ်ရ သတ်ရ တိုး၍ ပြုလုပ်လာတော့မည့် အန္တရာယ်ကြီးလည်း ပြည်သူများ အပေါ် ကျရောက်လာတော့မည် ဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှ တော်ဝင် နန်းတော်ကြီး၏ အိမ်ရှေ့စံ ချားလ် မင်းသားကြီးမှ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဆီရီယား နှင့် မြန်မာ ပြည်သူများ အားလုံး မိမိတို့၏ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့်များ နှင့် ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုများ ဒဏ်မှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ရုန်းထကြရန် နှစ်သစ်ကူး စာလွှာတွင် ဖေါ်ပြထားခဲ့သည်။
သို့သော် စစ်ခေါင်းဆောင် များ ၏ အိပ်ကပ်ကို ပြားချပ်သွားအောင် လုပ်နိုင်သည့် ရေနံ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများအား ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ရေးကို ဘိုင်ဒင် နှင့် မာကရွန် တို့က မသိကျိူးကျွံ ပြုနေကြဆဲ ပင် ဖြစ်သည်။
အီးယူ၏ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှု များထဲတွက် မြန်မာ၏ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းကို ထည့်သွင်းလိုဟန် ရှိသော်လည်း အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ဖြစ်သော ပြင်သစ်မှ ဗီတိုအာဏာဖြင့် ပယ်ချနိုင်ခွင့် ရှိနေသဖြင့် အီးယူ အဖွဲ့လည်း အကျပ်ရိုက်နေသည်။
ဤသည်ကပင် မြန်မာစစ်တပ်၏ အဓမ္မ ပြုကျင့်မှုများ၊ မထင်လျင် မထင်သလို ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်နေမှု များအား တားဆီးရမည့် အရေးထက် ၎င်းတို့ ကုမ္ပဏီများ၏ အမြတ်ငွေများ ထိခိုက်မည့် အရေးကို ပို‌၍ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေကြပုံ ရှိသည်ဟု ဗြိတိန်ရှိ ဘားမား ကမ်းပိန်း အဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး မိုက် ဖာမားက ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်လိုက်သည်။
ထိုလုပ်ငန်းများ အပေါ် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူရန် တကမ္ဘာလုံးရှိ လူ့အခွင့် အရေး အဖွဲ့များက ကျယ်‌ကျယ်လောင်လောင် တောင်းဆိုလာနေသည့် အရေးကြောင့် အနှေးနှင့် အမြန်ဆိုသလို ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ် ရှိနေသည်ဟု ယူဆရသည်။
Previous Article အမေစုရုံးချိန်း ရလဒ်ကောင်းပီ see more….
Next Article ဟန်ငြိမ်းဦးဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရား